दलान नेपाल : September 2013
“कहिले भारतीय त कहिले नेपाली नम्बरका फोनबाट पैसा माग्ने, नदिए जे पनि हुन्छ भन्थे। बच्चाहरूको नाम र उनीहरू पढ्ने स्कूलको नाम सुनाउँथे। त्यसमाथि दिनहुँको बन्द–हड्ताल त छँदैथियो।” यो भनाइ महोत्तरी जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरबाट तीन किलोमिटर दक्षिणको भारतीय बजार भिठ्ठामोडका होलसेल किराना व्यापारी ऋषिकुमार मुरारकाको हो। उनी जलेश्वरमा दशौं वर्ष पुरानो कारोबार बन्द गरेर दुई वर्षअघि भिठ्ठामोड पसेका हुन्। भिठ्ठामोडका अधिकांश ठूला पसल मुरारका जस्तै 'अशान्त मधेश' बाट पलायन भएर आएका नेपाली व्यापारीले चलाएका छन्। वर्ष दिनअघि भिठ्ठामोडमा 'खुश्बू वस्त्रालय' खोलेका रामजसो दास जलेश्वर नजिकैको मरैय बजारमा २५ वर्षदेखि चलेको कपडा पसलमा ताला लगाउनु पर्दा तरक्क आँशु झ्रेको बताउँछन्। अर्का विस्थापित नेपाली व्यापारी विक्रम अग्रवाल भन्छन्, “जलेश्वरमा टिक्न केसम्म गरिनँ? मारवाडी भएर मदिरा पसल समेत खोलें। तर, केटाहरूको समूहले आएर खान्थे र पैसा माग्दा पार्टीको मान्छेलाई हेप्ने भन्दै धम्की दिन्थे।”
जलेश्वरनाथ महादेवको मन्दिर भएको मिथिला क्षेत्रकै एउटा प्रमुख धार्मिकस्थल हो, जलेश्वर। पाँच वर्षअघिसम्म नेपालका विभिन्न जिल्ला र भारतबाट आउने मानिसहरूको घुइँचो लाग्ने मन्दिरमा मधेशी–पहाडी सरोबरी देखिन्थे। अहिले जलेश्वरमा पहाडी र भारतबाट आउनेहरूको त कुरै छोडौं, स्थानीयहरूको चहलपहल हेर्न पनि साप्ताहिक हाट नै पर्खनुपर्छ। बुद्धिजीवीहरू यसका लागि मधेश आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थितिलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँछन्। जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दिपु साह भन्छन्, “परिस्थिति यस्तै रहने हो भने जलेश्वर पूरै सिद्धिन्छ।” सरकारी कार्यालयमा काम परेर आउनेहरूबाट मुश्किलले धानिएका महेन्द्र चोक छेउछाउका करीब दुई दर्जन चियानास्ता पसल– जलेश्वरको सम्पूर्ण व्यापारिक गतिविधि यति नै छ, अहिले। ४० वर्षदेखि जलेश्वरमा स्थापित जलान, सर्राफ, मुरारका लगायतका व्यापारिक परिवारमध्ये गएको पाँच वर्षमा कोही भारत त कोही नारायणघाट र काठमाडौं सरेका छन्। उवासंघका उपाध्यक्ष साह जातीय सद्भाव र आर्थिक जीवनका पाटाहरू बुझदै नबुझ्ी मधेशको नाममा गरिएको राजनीतिले जलेश्वरको मात्र हैन, पूरै मधेशको आर्थिक जीवन बर्बाद पारेको बताउँछन्। मधेशी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट पूर्व सभासद् अभिषेकप्रताप साह पछिल्लो समय तराई–मधेशका व्यापारीहरू सशस्त्र समूह र माओवादीदेखि प्रशासनसम्मको शिकार भएका बताउँछन्। उनका अनुसार, प्रशासनका मानिस व्यापारीसँग पेट्रोल–डिजल माग्छन् भने माओवादी चन्दा र सशस्त्र समूह फिरौती असुल्छन्। मधेशमा बिग्रेको बन्दव्यापारको प्रतिबिम्ब राजस्व संकलनमा स्पष्ट देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा रु.२७ करोड ४३ लाख ५२ हजार राजस्व संकलन भएको जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा २०६७/६८ मा रु.१३ करोड ९६ लाख १० हजार मात्र उठ्यो।
२०५२ सालमा पश्चिम पहाडबाट सल्किएको माओवादी हिंसाको झिल्को महोत्तरी आइपुग्दा अरुण खेम्का जलेश्वरको मिनी बजारमा वरफ उद्योग चलाइरहेका थिए। माओवादीको विगविगीसँगै हैसियत भन्दा बढी चन्दाको माग हुन थालेपछि खेम्का परिवार उद्योग बन्द गरेर भिठ्ठामोड पुग्यो। अहिले भिठ्ठामोडमा सबभन्दा चल्तीको 'नेपाल–भारत साडी संगम' चलाइरहेका खेम्का भन्छन्, “उताको जति माया लागे पनि यता आएर राम्रै गरेछु भन्ने लागेको छ। उता त अहिले पनि व्यापार गरेर बाँच्ने अवस्था छैन।”२०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै मधेश आन्दोलन भयो। तर, आन्दोलनपछि मधेशमा शान्ति होइन, माओवादीले रोपेको हिंसाको बीउ फस्टाउने वातावरण बन्यो। व्यापारी र पहाडी समुदाय राजनीतिको आवरणमा खुलेका सशस्त्र आपराधिक समूहको निशानामा परे। कसैले चाहेर पनि उद्यम गर्न सक्ने अवस्था रहेन। भिठ्ठामोडमै इलेक्ट्रोनिक्स सामानको होलसेल पसल चलाइरहेका महोत्तरी थरुवाहीका दिलीप मण्डलले आफ्नै ठाउँमा काम गर्न चाहे पनि संभव नभएपछि यता आएको बताए। धवौलीका नजाम साफीले पनि चार वर्ष गाउँमै चलेको टेलरिङ पसल भिठ्ठामोड सारेका छन्। सधैंको बन्द, हड्तालमाथि चन्दा आतंक र असुरक्षा थपिएपछि छोड्नुपरेको उनले बताए। साफी भन्छन्, “चौबीसै घण्टा परिवारको को कहाँ कतिबेला अपहरणमा पर्ने र कति रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हो भन्ने त्रासमा बस्नु परेपछि पलायन हुनुपर्‍यो।”
मंगल पाण्डेको कथा
at 8:30 PM Posted by Dalan
मंगल पाण्डे (भोला मुखिया)
at 9:59 PM Posted by Dalan
कानुनी मान्यता पाए पनि तराईमा अझै तेस्रोलिङ्गीहरू सामाजिक उपेक्षाको सिकार भइरहेका छन्।
पाँच वर्षदेखि तराईमा क्रियाशील तेस्रोलिङ्गी-अधिकारकर्मी परिना चौधरी तराईको सामाजिक संरचनामा तेस्रोलिङ्गी-अधिकारवादीहरू परिचय लुकाएर काम गर्न बाध्य भएको बताउँछिन्। हालै आफ्ना पाँच सहकर्मीसँगै तालिममा काठमाडौँ आएकी परिनासँग २२ पुसमा भेट्दा उनीबाहेक अरूले आफ्नो परिचय खोल्न चाहेनन्। उनकी एक साथीले यो संवाददातालाई भनिन्, “मैले आफूलाई सार्वजनिक रूपमा चिनाएँ भने समाज त परको कुरा, घरमै पनि बस्न सक्ने वातावरण हुँदैन।”
नेपालगञ्जलाई कार्यक्षेत्र बनाएकी परिनाका अनुसार बाँके र बर्दियामा सात हजार भन्दा बढी तेस्रोलिङ्गी उनीहरूको अभियानमा आबद्ध छन्। “तेस्रोलिङ्गी हुनु भनेको शारीरिक अपाङ्गता हुनु न हो”, उनी भन्छिन्, “तर समाजमा अरू अपाङ्गता भएका र हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै भिन्नता छ। तराई-मधेशको सङ्कीर्ण परम्पराले हामीहरूलाई गिज्याइरहेको छ।”
२०५७ सालमा एसएलसी पास गरेर पढ्न काठमाडौँ आएकी परिनाले यहाँको वातावरणमा आफूलाई असहज महसुस गरी नेपालगञ्ज फर्केर पढाइलाई निरन्तरता दिइन्। पुरुषको जस्तो शारीरिक बनोट भए पनि सानैदेखि महिलाहरूका क्रियाकलापप्रति आकर्षित उनले समाजले गलत रूपमा हेर्ने डरले १० कक्षा पढ्ने बेलासम्म आफूलाई सार्वजनिक गरिनन्। काठमाडौँ आएर आफ्नो अधिकार बारेमा ज्ञान हुन थालेपछि मात्रै उनमा तेस्रोलिङ्गीको अधिकारको वकालतमा लाग्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास भयो।
नेपालगञ्जमा काम शुरु गर्दा परिनाले समाजबाट अपहेलना मात्र होइन, ढुङ्गामुढा समेत खाएकी थिइन्। डेढ वर्षअघि नेपालगञ्ज जैसपुरको मुस्लिम बस्तीमा पुग्दा स्थानीय सामाजिक अगुवाहरूले उनी र उनका साथीलाई समाज बिगार्न आएका भनेर गाली गरी फर्काइदिएका थिए। तर परिना भन्छिन्, “अहिले त्यही ठाउँलाई लक्ष्य बनाएर हामीले सचेतना कार्यक्रम चलाएका छौँ।” परिनाका अनुसार मधेशको समाजमा तेस्रोलिङ्गीको सङ्ख्या धेरै छ, तर उनीहरू आफ्नो धार्मिक-सामाजिक मान्यताका कारण बाहिर आउन सक्दैनन्। परिनासँग काठमाडौँ आएका तेस्रोलिङ्गी साथीहरू मधेशी-बाहुन थिए।
नेपालमा सन् २००१ मा तेस्रोलिङ्गी अधिकारकर्मीले ब्लु डायमण्ड सोसाइटीको नाममा सङ्गठित भएर यस विषयमा काम गर्न थालेपछि काठमाडौँ लगायतका केही ठाउँमा उनीहरू आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुँदै अगाडि आएका हुन्। पछि सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिङ्गीले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानका आधारमा नागरिकता लिन र अन्य सरकारी कामकाजमा संलग्न हुन पाउने फैसला गर्‍यो। तर परिना भन्छिन्, “तराई मधेशका जिल्लामा अझै पनि धेरै तेस्रोलिङ्गी आफ्नो स्वतन्त्र परिचयका आधारमा नागरिकता लगायतका कामकाजमा संलग्न हुन नसक्ने अवस्था छ। त्यहाँ यो अभियानका लागि ठूलो चेतनामूलक कार्यक्रमको खाँचो छ।” उनी आफैँ नेपालगञ्जमा वेस्टर्न स्टार नेपाल नामक संस्था खोलेर यो अभियानलाई अगाडि बढाउँदै आएकी छन्।
नेपालगञ्ज मात्र होइन बारा, रौतहट, धनुषा र सुनसरीमा पनि तेस्रोलिङ्गीको अधिकारको आवाज उठ्न थालेको छ। मैथिली संस्कृतिविद् तथा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका संस्कृति विभाग प्रमुख प्राज्ञ रामभरोस कापडी तराई-मधेशको समाज दिनप्रति दिन खुला र सहज हुँदै गएको बताउँछन्। उनका अनुसार पहिला-पहिला सङ्कीर्णताका कारण यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक ठाउँमा देख्ने वित्तिकै जिस्क्याउने चलन थियो, पछि विस्तारै यस्ता गतिविधि न्यून हुँदै गइरहेका र उनीहरू पनि सचेततापूर्वक अगाडि आउन थालेका छन्। “तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि यस्तो समस्या विद्यमान छ”, कापडी भन्छन्, “शहरी क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूको गतिविधि बढ्दै गएकाले सामाजिक धारणा बदलिँदैछ।”
जनकपुरका अधिकारकर्मी सञ्जय चौधरी धनुषामा मात्रै १० हजार भन्दा बढी तेस्रोलिङ्गी भएका बताउँछन्। “यस क्षेत्रमा काम गर्न अझै धेरै चुनौती छ। समाजदेखि घरपरिवारसम्म राम्रो नजरले हेर्दैनन्”, उनी भन्छन्, “तर पनि विस्तारै सुधारका लक्षणहरू देखा पर्दैछन्।” जनकपुर जस्ता शहरबजारमा तेस्रोलिङ्गीहरू विस्तारै खुलेर आउन थाले पनि ठूलो जनसङ्ख्या भएका ग्रामीण भेगमा अहिले पनि उनीहरू यस्तो कुरा लुकाइहेका छन्।
Source - http://nepalihimal.com/news.php?id=4721
अब मधेश हार्ने छैनन
at 8:40 PM Posted by Dalan
के मधेशवादी नेताहरु चुनाव हार्दैमा मधेश राजनितीक रुपमा ओरालो लाग्ला ?
आउदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हाल विभिन्न पार्टीहरुको वारेमा अनेकन टिप्पणीहरु सुन्न पाईन्छ । त्यसै सन्दर्भमा मधेशवादी दलहरु अब सकिन्छ भन्ने आवाज पनि काठमाडौमा बाक्लै सुनिन्छन । काठमाडौको एउटा तप्कामा अब मधेशवाट मधेशी नेताहरु अघिल्लो चुनाव जस्तो गरी जित्न नसकिने र उनीहरु मध्ये धेरैको अस्तीत्व समाप्त भएर जाने तर्क गर्छन । हो, एउटा कुरा के निश्चित छ भने आउदो निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनको जस्तै आकारमा त मधेशवादी दलहरु आउने छैनन । तर के मधेशवादी दलहरु हार्दैमा निर्वाचन पछि फेरी राजनितीक रुपमा मधेश ओरोला लाग्ला त ?
निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरु जुन आकारमा आए पनि मधेश अब राजनितीक रुपमा ओरालो लाग्ने छैनन । मधेशमा विकसित राजनितीक मनोविज्ञानको उचाईलाई अहिले कुनै मधेशवादी दलहरु वा नेताहरु प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्थामा पनि छैनन । त्यसैले आउदो चुनावमा जुनसुकै पार्टीहरु मधेशवाट चुनाव जितेपनि मधेशको मुद्धा र मधेशवादी राजनिती अब ओझेलमा पर्ने छैनन ।
कतिपयले ००७ र ०४७ मा पनि मधेशवादी दलहरुले भावनात्मक रुपमा अघि आएपनि व्यवहारिक रुपमा धेरै टिक्न नसक्दै ओझेलमा परेको उदाहरण काठमाडौमा अचेल खुवै दिने गरिन्छन । तर ००७ सालको सेरोफेरोमा सुरु भएको मधेश राजनिती ०७० मा आईपुग्दा अनेकन तिता ईतिहासको अनुभुति संगालिसकेका छन । र आज मधेशका युवाहरु खासगरी जुन मधेशवादी राजनितीक वर्तमानवाट गुज्रीरहेका छन त्यो पक्कै पनि उनीहरुका लागी सहज त छैनन तर त्यसको अर्थ यो पनि छैन कि मधेशका युवाहरु एमाले, काग्रेस र माओवादी प्रति सन्तुष्टि छन । त्यसैले मधेश राजनितीक रुपमा एकदमै खतरनाक मोडमा छन । जसलाई आउदो निर्वाचनले खासै प्रभाव पार्ने लक्षणहरु देखा परिरहेको छैन ।
आउदो निर्वाचनमा मधेशवाट जुनसुकै पार्टीहरु चुनाव जितेपनि त्यसले मधेशमा वढदै गएको राजनितीक मनोविज्ञानलाई कुनै असर पार्ने छैनन । जुन विभिन्न तरिकाले अनेकन रुपमा भिन्ना भिन्नै रुपमा देखिने छन र मधेशको मुद्धा मात्र होईन कि मधेशको राजनितीक पनि ओराला लाग्ने छैन । र एक मधेशी युवा नेता कै शब्दमा भन्ने हो भने, आउदो निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरु हारे पनि अब मधेश हार्ने छैनन ।
मधेशी नेता र भारतीय सचिव सिंह विच भेटवार्ता
at 10:48 PM Posted by Dalan
हिजो दुई नेपाल भ्रमणमा काठमाडौ आईपुगेकी भारतीय विदेश सचिव सिंह आज विहान मधेशी नेताहरुसंग सामुहिक रुपमा भेटेका छन ।
दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहेकी भारतीय विदेश सचिव सुजाता सिंह आज विहान मधेशवादी नेताहरु संग भेटेका छन । उनी बसेको द्धारिका होटलमा विहान ८ बजे पुगेका मधेशी पार्टीका शिर्ष नेताहरुसंग सिंहले सामुहिक भेटवार्ता गरेका थिए ।
मधेशी मोर्चामा आबद्धमा महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव, सहित फोरम नेपालका भरतविमल यादव, संघीय सदभावनाका अनिल झा उनीसंगको भेटवार्तामा सहभागी थिईन । सदभावना अध्यक्ष महतोका अनुसार भारतीय सचिव सिंह नेपालमा ४ मंसिरमै चुनाव होस भन्ने धारणा राखेकी थिईन ।
फोरम नेपालको हारसरमा मन्थन
at 12:40 AM Posted by Dalan
सुरक्षा सहित अन्य कयौन चुनौति आईलाग्दा फोरम नेपाल त्यसको तयारीमा धनुषाको हारसर गाउमा बसेर एक हप्ते मन्थन गरेका छन ।
२ भदौ देखि ८ सम्म फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पार्टीको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका झण्डै १०० नेतालाई लिएर धनुषा जिल्लाको गोपालपुर गाविस अन्र्तगतको हारसरमा बसे । त्याहा यसरी सात दिने बासका लागी यादव किन पुगे त ? फोरम स्रोतका अनुसार पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्न थालेको बेला चुनावमा कसरी प्रस्तुत हुने वारेमा आन्तरिक तयारीका लागी यादवले उक्त बासको बन्दोबस्त मिलाएका थिए ।
अर्को संयोग वा सुनियोजीत तयारी भनौ, एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि यो अवद्यी भर धनुषामै विताएका थिए । प्रचण्डले आफु पनि मधेशवाटै चुनाव लडने उदघोष गरेका छन । अघिल्लो संविधानसभाको पुर्व सन्ध्यामा माओवादी र फोरम विच रौतहटको गौरमा आमुन्ने सामुन्ने हुदा ठुलै हिंसात्मक उत्पात मचेको थियो ।
अघिल्लो महिना मात्रै फोरमको महोतरी जिल्लामा रहेको पार्टी कार्यलयमा गोली प्रहार हुदा त्याहा उनका जिल्ला सचिव धाईते भएका थिए । घटनाको जिम्मेवारी तराई मधेशमा सक्रिय सशस्त्र समुहहरुले लिएका थिए । त्यसपछि फोरम नेपालका नेतृत्वले आउदो निर्वाचनमा आफुहरु सशस्त्र समुहको निशानामा पर्न सक्ने भन्दै आन्तरिक रुपमा विभिन्न छलफल चलाउन थालेका छन । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महोतरी घटनापछि यो संवाददातासंगको एउटा टेलिफोन वार्तालापमा भनेका थिए, ‘हामी यो घटना पछि चुप लगाएर बस्दैनौ, यो घटना गराउने लाई हामी त्यतीकै छाडदैनौ ।’
यादवको ‘हारसर राजनिती शिविर’ मा पहिलो तीन पछिको बाकी चार दिन पुर्ण रुपमा चुनावी सुरक्षा र चुनावमा फोरम नेपालका नेताहरु कसरी प्रस्तुत हुने बिषयमा केन्द्रित थियो ।
फोरम नेपालका केन्द्रिय सदस्य अशोक यादव भन्छन, ‘शुरुको तीन दिन राजनितीक प्रशिक्षण वाहेक अन्य चार दिन हामी चुनावी चुनौतीका सबै पाटाहरु माथी छलफल गर्यो ।’ आउदो चुनावमा फोरम नेपालले मधेशमा सशस्त्र समुहहरुका साथै अन्य मधेशवादी दलहरु नै आफनो लागी सबै भन्द्या ठुलो चुनौती हुन सक्ने आकंलन निकालेको फोरम स्रोतको दाबी छ । ‘त्यो अवस्था फोरम नेपालका लागी भने अत्यन्तै जटील हुनेछ’ फोरम नेपालका एक नेता भन्छन ‘यस्तो अवस्थामा हामी अत्यन्तै कुटिल भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ ती नेताका अनुसार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध मधेशी पार्टीहरु कुनै न कुनै रुपमा सहकार्य गरेरै चुनावी मैदानमा जाने भएकाले फोरम नेपाल आफनो तयारीलाई अली गोप्य र सशक्त बनाउन लागेका हुन ।
केन्द्रिय सदस्य यादवले पनि एक हप्ते उक्त शिविर आउदो निर्वाचनका लागी महत्वपुर्ण सावित हुने कुरामा जोड दिए । उनले भने , ‘८ भदौमा यो शिविर सक्ने वितिकै पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठक बस्दै छ, जसले केही महत्वपुर्ण निर्णयहरु पनि सार्वजनिक गर्ने छन ।’ यादवका अनुसार हारसर शिविरमा चुनावका लागी आवश्यक सबै मोर्चामा पार्टीलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने वारेमा अध्यक्ष यादव सहित केहि वरिष्ठ नेताहरुले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
भदौको अन्तिम साता मात्रै फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा रहेको मोर्चाले चार दलीय सयन्त्रसंग चुनावका लागी ६ बुदें सहमती गरेका थिए । हुनत संविधानसभा विघटनको पुर्व सन्ध्या देखि आन्दोलनमै रहेका यादव मधेशमा छुटै आन्द्योलन गरेर मधेशवादीदलहरुको अस्तीत्व धरापमा पार्न पनि खाजेकै थिए तर उनले चाहदै मा आन्द्योलन हुन नसक्ने कुराको पछिल्लो प्रमाणको रुपमा पनि कतिपयले यो सहमतीलाई लिएका छन ।
पहिलो संविधान सभाको चुनावमा मधेशवाट सबै भन्द्या ठुलो पार्टीको रुपमा उदय भएका यादव नेतृत्वको फोरम पछिल्लो चरणमा अत्यन्तै सानो आकारमा सिमित हुन पुगेका छन । विजय गच्छदार र जेपी गुप्तावाट ठुलो क्षती व्योहोरेका यादव आफनो पार्टी फुटाउनमा मधेशी मोर्चाको ठुलो हाथ रहेको आरोप लगाउदै आएका छन । त्यसको आलावा फोरमले सानो तिनो फुटको पनि राम्रै मार खेपिसकेका छन ।
त्यसपछि पछिल्लो समयमा तराईका केही सशस्त्र समुहले पनि उनका नेताहरुलाई चुनावी अभियानमा अवरोध गर्न थालेपछि यादव अरु मधेशी पार्टीहरु प्रति थप क्रुद्ध भएका छन । उनी निकट स्रोतका अनुसार, यादव महोतरी घटनामा मधेशवादी दलहरु मौन बस्नुलाई गम्भिरता पुर्वक लिनु पर्ने कुरा आफना निकटस्तहरु सम्कक्ष राख्ने गर्छन ।
यसरी चौतर्फी रुपमा आफु घेराबन्दीमा परेको भन्दै यादव पछिल्लो समयमा रुष्ट पनि देखिन्थ्यो । त्यसैकै परिणम स्वरुप होला, यादव हारसरको राजनितीक शिविरमा आफना विश्वास पात्र र चुनावका लागी उपयुक्तहरुलाई मात्रै डाकेका थिए । जसमध्ये अधिकांश आउदो निर्वाचनका उम्मेदवार पनि हुन । यसरी सुरक्षा सहित राजनितीक रुपमै आफुलाई अप्ठायरो महसुस गर्ने यादव के चुनावलाई थप हिंसात्मक बनाउला त ? फोरम नेपालका एक नेता भन्छन, ‘आईलागेमा आफना रक्षाका लागी अरु त बचाउने काम पनि हुदैन ।’